Uyifaka njani kwaye uyilayisha njani i-ggplot2 kwi-R
NguAndrie de Vries, uJoris Meys
Kubaggplot2ayiyonxalenye yosasazo oluqhelekileyo lwe-R, kuya kufuneka ukhuphele iphakheji kwi-CRAN kwaye uyifake.
Inkqubo ye- Inethiwekhi ebanzi yoVimba (I-CRAN) yinethiwekhi yamaseva kwihlabathi liphela aqukethe ikhowudi yemvelaphi, amaxwebhu, kunye nezongezo kwiipakeji zeR.
Iphakheji nganye engenisiweyo kwi-CRAN nayo inephepha elichaza ukuba iphakheji imalunga nantoni. Ungayijonga ifayile ye- ggplot2 iphepha ngolwazi oluthe kratya.
Nangona kuyinto eqhelekileyo ukuba ujonge nje kwiphakheji njengeggplpl, enyanisweni, kukuphumeza okwesibini kwegrama yemizobo yeR; yiyo loo nto iphakhejiggplot2. Ngokubhala, ingxelo yangoku yephakheji yinguqulelo engu-0.9.0.
Mhlawumbi ngokudideka, owona msebenzi ubalulekileyo kule phakheji nguggplot (). Qaphela ukuba umsebenzi awuna-2 egameni lakhe. Ke lumka ukubandakanya u-2 xafakela iipakethe ()okanyeithala lencwadi ()i iphakheji kwikhowudi yakho ye-R, kodwa i umsebenzi ggplot ()ngokwayo ayiqulathanga u-2.
Nantsi indlela yokwenza faka ipakethe okokuqala ngefakela iipakethe ()umsebenzi kunye nokulayisha iphakheji ekuqaleni kweseshoni nganye ye-R ngeithala lencwadi ()umsebenzi.
Ukufaka ifayileggplot2package, Sebenzisa oku kulandelayo:
Kwaye ukuyilayisha, sebenzisa oku kulandelayo:
kwisisu esiqulethe intliziyo
Isichongi se pilisi esiqhelekileyo
Ibupropion hcl xl 150
i-fluocinonide phezu kwekhawuntari
intlanzi vs ioli yekrill
yintoni eblue 1 eyenziwe